ज्वाईंले ‘वेपत्ता भई’ भनेको चेली गाडिएको भेटिएपछि… - Sidha News
ज्वाईंले ‘वेपत्ता भई’ भनेको चेली गाडिएको भेटिएपछि…
‘सुम्निमा हराई ! खोजी गरिरहेको छु,’ सोनाम लामाले केही दिन अघि ससुरालीमा फोन गरेर जानकारी गराए । छोरी हराई भन्दा सुम्निमाका तनहुँ बन्दीपुरस्थित माइतीतर्फको परिवारको मनमा चीसो पस्यो ।
उनीहरुले ज्वाईंलाई कतै केही त गरेको होइन ? भनी सोधे । सोनाम अकमकिएर खोजी गरिरहेको जानकारी दिए । काभ्रे घर भएका सोनामले सुनकोशीमा फाल हालेको हुनसक्ने भएकाले खोजी गरिरहेको सुनाए ।
सुम्निमाका माइती खलकले शंका लागी प्रहरीमा उजुरी दिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले अनुसन्धान अगाडि बढायो । सोनाम लामामाथि अनुसन्धानको सुई तेर्सियो । शुरुमा उनले कोशीमा आ’त्मह’त्या गरेको हुनसक्ने भने । अपराध लुकाउन खोजे । तर, प्रहरीले चाल पाइसकेको थियो ।
अनुसन्धान गर्दै जाँदा केही प्रमाणहरु फेला पारेपछि सोनामसँग सोधपुछ भयो । उनले वास्तविकता लुकाउनै सकेनन् । ह’त्या गरी चौरीदेउराली गाउँपालिका ९ गोठपानीस्थित घरभन्दा केही तल मकैबारीमा गाडेको भेटियो । शव गाडेको अवस्थामा फेला पर्यो । ५ जेठमा श’व झिकियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका अनुसार सोनामले १ जेठको राति ह’त्या गरी २ जेठको विहान गाडेको बयान दिए ।
३ वर्ष अघि मात्र सुम्निमाले सोनामसँग विवाह गरेकी थिइन् । दुवैबीच झाँङ्गिएमो प्रेम विवाहमा परिणत भयो । सुम्निमाले विवाहको वर्ष दिनमै छोरालाई जन्म दिइन् । उनीहरुको जीवन सामान्य तरिकाले बढ्दै थियो । तर, सोनाम विस्तारै कुलततिर लाग्न थाले । उनले सुम्निमालाई कुटपिट गर्थे ।
१ जेठको राति उनले योजनावद्ध रुपमै सुम्निमाको हत्या गरे । उनको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको खुलेको छ ।
सुम्निमा र सोनामबीच विवाहको २ वर्ष बितेपछि विवाद बढ्यो । उनीहरु एकले अर्कोमाथि आशंका गर्न थाले ।
प्रहरीका अनुसार सोनामले बयानका क्रममा सुम्निमाको फेसबुकमा विभिन्न केटाहरुको मेसेज आउने गरेको र सम्झाउँदा पनि नमानेपछि ह’त्या गरेको बताएका छन् ।
दुवैबीच सामाजिक सञ्जालको प्रयोगको विषयले विवाद भएको र ह’त्याको कारण पनि त्यही देखिएको काभ्रे प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
प्रेमपछि घृणा अनि हिंसा
तीन वर्ष अघि तनहुँ बन्दीपुरकी १९ वर्षीया सुम्निमा गुरुङ्ग र काभ्रे चौरीदेउरालीका २५ वर्षीय सोनाम लामाबीच प्रेम विवाह भएको थियो । दुवैले सुन्दर सँसारमा सुन्दर जीवन जीउने कसम खाएका थिए । उनीहरुबाट विवाहको वर्ष दिनमै छोराको जन्म भयो । जीवन सामान्य रफ्तारमा चल्दै थियो ।
विवाहपछि सन्तानको जन्म भएपछि सोनाम कुलतमा लाग्न थाले । मद्यपान नियमित गर्ने र पत्नीमाथि कुटपिट गर्ने गर्थे । सुम्निमा सुन्दर भएकीले शंका धेरै गर्थे । फेसबुक चलायो कि चासो राख्थे । जसका कारण उनीहरुबीच विवाद बढ्दै गयो ।
सोनामले १ जेठको राति सुम्निमालाई हत्याकै उद्देश्यले कुटपिट गरे । टाउकोमा हतियार प्रहार गरे । हत्यापछि २ जेठको विहानीपख शव व्यवस्थापन गरे । गोठपानीस्थित घरमुनी मकैबारीमा गाडे ।
बुहारी नदेखेपछि सोनामका बाबुआमाले चासो देखाए । २ वर्षको छोराले आमा निकै खोज्यो । सोनामले घरपरिवारलाई वेपत्ता भएको भन्दै ढाँटे । सुम्निमा केही दिनयता सम्पर्कमा नआएपछि बन्दीपुरस्थित माइतीले चासो राखे ।
ज्वाईंलाई सम्पर्क गरे । उनीहरुलाई सोनामले ढाँटेर वेपत्ता भएको भने । खोजी भइरहेको सुनाए । बारम्बार ढाँटेपछि शंका गर्दै ससुरालीतर्फबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा उजुरी गरे ।
त्यसपछि अनुसन्धान अगाडि बढ्यो । अनुसन्धान गर्दै जाँदा केही प्रमाणहरु फेला पारेपछि सोनामसँग सोधपुछ भयो । उनले वास्तविकता लुकाउनै सकेनन् । ह’त्या गरी चौरीदेउराली गाउँपापलिका ९ गोठपानीस्थित घरभन्दा केही तल मकैबारीमा गाडेको सुनाए । ५ जेठमा शव झिकियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका अनुसार सोनामले १ जेठको राति हत्या गरी २ जेठको विहान गाडेको बयान दिए ।
फेसबुकको प्रयोग र शंकालु पति सुम्निमा ह’त्याको कारण बन्यो । सुम्निमाको हत्यासँगै २ वर्षीय बालक टुहुरा भए । आमाको हत्या र बाबु जेलमा जाने भएपछि बालकको भविष्यबारे चिन्ता बढेको छ । बालकका हजुरबाबुलाई पनि बुहारीको हत्या भएको जानेर पनि लुकाएको अभियोगमा पक्राउ गरिएको छ ।